Shiinaha darbiga derbiga lagu qurxiyo ee furayaasha soo saaraha iyo alaableyda | Shengrui
Qurxinta darbiga qurxinta ee furayaasha
Naqshadeynta asalka ah "HOME MACAAN HOOME" naqshadeynta darbiga derbiga. Doorashada guriga macaan.
Naqshad: Naqshad asal ah "HOME SWEET HOME" naqshadeynta jillaab derbiga .Signal iyo xarrago. Doorashada guriga macaan.
Ku xirnaanta furaha muhiimka ah ee shaqeynaya: Naqshad, naqshad madow, guryahan iyo kuwa haysta furaha gaariga ayaa lagu dhejin karaa meel kasta oo aad rabto inaad furayaashaada ka dhigto mid aad u abaabulan. Tani qurux badan“GURIGA MACAAN GURIGA” furka furaha waxaa kujira 10 qabatooyin shaqsi oo laalaada oo loo isticmaalo keydinta furayaasha, sameecadaha, ama waxyaabaha yaryar ee shaqsiga ah.
Kaydinta caqliga leh: Ku ilaali qolalka dhoobada iyo marinnada soo gala si hagaagsan oo hagaagsan saldhiggan muhiimka ah. Wanaagsan tahay furayaasha haynta, leasyada xayawaanka, koofiyadaha, dalladaha, qalabka iyo waxyaabo kale oo badan. Qaabaynta casriga ah ee qabanqaabiyahan ayaa kaabi doonta gurigaaga kana dhigi doonta gurigaaga mid macaan.
Qalabka sii kordhaya waxaa ka mid ahaa: Furaha furaha kasta ee darbiyada, jikooyinka, ama albaabka laga soo galo gudaha sidoo kale wuxuu la yimaadaa boolal iyo fiilooyin si looga dhigo mid deg deg ah oo sahlan.
Tayada: Laga sameeyay maaddada birta culus ee culus waxay bixisaa qaab muddo dheer soconaya, shaqeynaya, iyo adkeysi. Aad u xoogan, adag, oo leh faahfaahin buuxda. 100% kormeerka tayada kahor rarka.
Hadiyad caqli-gal ah oo guri-wanaag ah: Waxay u fiican tahay lamaanayaasha cusub, lamaanayaasha cusub, asxaabta, iyo qoyska, kuwani waxay hadiyad qaali ah u sameeyaan qof kasta oo leh qoysas ballaaran ama baabuur badan.
Cabbirka la heli karo: 11.8 "L, ama la qaabeeyey.
Dhamee: Budada waara ee lagu dahaadhay midab madow iyo caddaan ah.
Si Weyn Loo Adeegsaday: Qabo furayaasha, jaakadaha, boorsooyinka iwm Maaha kaliya naqshad jillaab, sidoo kale qurxinta derbiga.
Hore: Farshaxanka gidaarka birta Islaamka
Xiga: Qurxinta Haysta Shumaca Birta
Geedka nolosha Buug-gacmeedka biraha
Farshaxanka gidaarka birta Islaamka
Saacadda gidaarka birta Islaamka